Puree exotic misy voanio - Resety Thermomix | ThermoRecipes
menaka52 minitraOlona 2
Ny zavatra azo antoka indrindra dia ny fahaizantsika mahandro ireo akora mitovy amin'ny fomba fahandro mitovy. Angamba noho ny zavatra tian'izy ireo ao an-trano toy izao na satria fantatsika fa ity fomba ity dia voaravaka peta-kofehy. Fa indraindray tsy maninona ny mamadika ny fahitantsika ary manandrama zava-baovao. Izany indrindra no soso-kevitro amin'ity resipeo ity.
Ao an-tranoko indroa isan-kerinandro no mahandro sakafo legioma ary, mazava ho azy, ny voanemba eo izy ireo. Ka tamin'ity indray mitoraka ity dia nahandro azy ireo tamin'ny fomba hafa aho mba tsy hampahatezitra antsika.
Ny valiny dia puree miaraka a tsiro masiaka bena. Mety tsy dia mety loatra amin'ny fianakaviana manan-janaka kely izy io fa natao ho an'ny olona tia manandrana ny zava-drehetra.
Mazava ho azy, mamporisika anao aho hanomana an'ity fomba fahandro ity, indrindra raha te hahagaga olona ianao. Ankoatr'izay, toy ny mahazatra amin'ny menaka, dia azo omanina miaraka mialoha. Ity fihetsika tsotra ity dia hanamora kokoa ny fandaminana ny sakafo ho an'ny herinandro.
1 Puree exotic misy voanio
Krema misy tsiro masiaka tonga lafatra mba hahagaga ny vahininao.
Fotoana hiketrehana: 52M
20 g ny sakamalao vaovao voaravaka
Voamaina maina 1 tsy misy voa
Voatabia voatavo 60 g
Fehiloha tongolo gasy 1
5 g voanio
140 g ny voanio
Ronono voanio 70g
400 g ny ron-kena
Vovoka curry 1/4 sotro fihinanana
Arotsaka ao anaty vera ny ginger voahosotra, ny sakay, ny voatabia sy ny tongolo voatetika, ny tongolo gasy sy ny koriana. Manapaka ny zava-drehetra miaraka isika mandritra 5 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 5.
Ampidinintsika amin'ny lelany ny sisa tavela izay niraikitra tamin'ny vera. Ampio ny lentilles, lait de coco, ron-kena, poivre ary curry.
Izahay dia manao fandaharana 50 minitra amin'ny 100º, hafainganan'ny sotro ary mihodina miankavia.
Rehefa mandeha ny fotoana, dia manamarina fa malefaka ny lentils.
Avelantsika hidina amin'ny 100º ka hatramin'ny 90º ny mari-pana. Manorotoro izahay mandritra ny 1 minitra, hafainganana mandroso 5-7-9.
Mba handravahana dia azonao atao ny mampiasa ravina koriana na persily vitsivitsy. Ary na tostasy mofo nendasina ihany aza.
Raha avelanao hilomano ny lentil ny andro talohan'io, dia azonao atao ny mampihena ny antsasak'ilay fotoana fandrahoana azy, izany hoe 25 minitra.
Fanazavana fanampiny - Voanjo miaraka amin'ny voatavo sy chorizo
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Tsotra, General, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, legioma, Latsaky ny adiny 1, Lasopy sy menaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » legioma » Puree exotic misy voanio
Tiako ny menaka sy ny lentil, ka azoko antoka fa ho tiako ity lovia ity !!! oroka
Mayra dia hoy izy:
Tonga lafatra !! Ho hitanao fa hafa be ny fahitanao ireo lentil manetry tena!
Valiny tamin'i Mayra
Tadivavarana atody misy voatavo sy fromazy brie